Pituitary Follicle ume Ókè mmiri ọgwụ maka Ọgwụ (FSH) - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Pituitary Follicle ume Ókè mmiri ọgwụ maka Ọgwụ (FSH) [Description] Ngwaahịa a bụ na-acha ọcha ma ọ bụ gbanyụọ-ọcha ifriizi-Fikiere nkanka ma ọ bụ ntụ ntụ. [Function na ojiji] Ókè mmiri ọgwụ ọgwụ. Ọ nwere ike na-akwalite uto na mmepe nke ovarian follicles maka nwanyi ụmụ anụmanụ na-akwalite secretion nke ovarian estrogen ọnụ na LH, na-eme nkịtị estrus. Ọ-akpali mmepe nke seminiferous tubule epitheliums na sekọndrị spermatocytes nke nwoke na ụmụ anụmanụ, ma na-akwalite spermatogenesis ọnụ na ...
Pituitary F ollicle S timulating H ormone maka Ọgwụ (FSH)
Mmiri ọgwụ ọgwụ. Ọ nwere ike na-akwalite uto na mmepe nke ovarian follicles maka nwanyi ụmụ anụmanụ na-akwalite secretion nke ovarian estrogen ọnụ na LH, na-eme nkịtị estrus. Ọ-akpali mmepe nke seminiferous tubule epitheliums na sekọndrị spermatocytes nke nwoke na ụmụ anụmanụ, ma na-akwalite spermatogenesis ọnụ na LH.
1. ibu-ovulation nke ẹmbrayo transplantation.
2. Iji gwọọ mîkayarakede abata estrus ruru ka na-adịghị ejekwa ovarian ọrụ.
3. Iji gwọọ multiple-follicle development ruru ovarian hypofunction na infertility ruru ọzọ mmepe nke follicles na abụọ.
4. persistent corpus luteum.
1. Super ovulation: intramuscular ntụtụ 500-600IU na ngụkọta; ọ ga-agbara na 8 dị iche iche ugboro na decrement usoro na hà olu usoro; ọ ga-etinyere na-asatọ na iri na anọ ụbọchị (nke itoolu iri na abụọ ụbọchị dị mma) mgbe na-enye onyinye ehi abata estrus.
2. Ọgwụgwọ nke anyịnya ovarian ọrụ ma ọ bụ hypofunction: intramuscular ntụtụ 200IU nke FSH; mgbe ndị ọrụ bụ anyịnya, 100IU nke LH ga-eji cooperatively; na dosing ga-ugboro ugboro ugboro ma ọ bụrụ na ọ bụ adighi ike.
II. Ngwa Atụrụ amụba
1. Super ovulation: ndị nne ga-pretreated na progestational hormone maka 12-14 ụbọchị, mgbe mesoo ibu-ovulation 2 ụbọchị tupu ọgwụgwụ nke pretreatment; ma ọ bụ na nne ga-nyere ihe intramuscular ntụtụ FSH na nke iri na abụọ ma ọ bụ iri na atọ n'ụbọchị estrus okirikiri 3 consecutive ụbọchị (aturu) ma ọ bụ 4 consecutive ụbọchị (ewu) na otu nkeji nke 12 awa; ngụkọta dose ga-200-250IU.
2. Estrus akara: na anestrous oge, pretreatment na progestational hormone maka 14 ụbọchị na intramuscular injections nke 50IU nke FSH 1 ụbọchị tupu ọgwụgwụ nke pretreatment na n'ụbọchị ahụ nke pretreatment, karị, nwere ike ime ihe estrus nke ewes ma nweta a elu ọnụego nke mmekọrịta estrus.
III. Ngwa na P orcine R eproduction
1. Super ovulation: intramuscular ntụtụ 300-400IU na ngụkọta; ọ ga-agbara na 6-8 iche iche ugboro; ugboro abụọ n'ụbọchị nke 3-4 consecutive ụbọchị.
2. Ọgwụgwọ nke ezughi oke ego nke spam maka ozuzu boars: Pituitary follicle na-akpali akpali hormone (FSH); otu ugboro n'ụbọchị maka 2-3 consecutive ụbọchị, 50IU maka oge ọ bụla.
3. Estrus itinye n'ọkwa: intramuscular ntụtụ 100-150IU nke FSH ma ọ bụ 1000-1500IU nke PMSG maka aghakwa mkpụrụ bụghị estrus n'elu 15 ụbọchị mgbe ablactation, na intramuscular ntụtụ 0.1-0.2mg nke Cloprostenol sodium (Ntuziaka Nne na Nna) n'ụbọchị ahụ ma ọ bụ na esote ụbọchị.
Intramuscular ntụtụ 20-50IU nke FSH maka anoestrous nkịta na ovarian hypofunction otu ugboro n'ụbọchị 2 3 consecutive ụbọchị nwere ike ime estrus.
(1) Tupu iji ọgwụ, ovarian mgbanwe ga-enyocha, dị ka nke na-dose na ugboro ole a ga-gbanwee.
(2) Nke a ngwaahịa ga-kwadebere n'ime ngwọta maka nchekwa bụrụ na nke deactivation.
28 ụbọchị n'ihi na anụ, na 7 ụbọchị maka mmiri ara ehi
Previous: Oxytocin Ọgwụ (Pitocin)
Osote: Pituitary Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ maka Ọgwụ (LH)
Estradiol Benzoate Ọgwụ (Estrogen)
Ceftiofur sodium maka Ọgwụ
Tristerone Complicis Ọgwụ
Ime Mare ọbara Gonadotropin maka Ọgwụ ...